Izicathulo zeFreezer → Izingubo zesitolo esibandayo
Izicathulo zeFreezer zezimo ezimbi kakhulu
Emnyangweni izingubo zamakhaza nezitolo ezibandayo kukhona isigaba sefriji yezicathulo. KU-IN isigaba sezicathulo Siphinde sinikeze amasokisi ashisayo afriziwe enzelwe ukusebenza emazingeni okushisa aphansi. Izicathulo ezinamandla, izingqimba eziqinisiwe nokunamathiselwa okungeziwe kuyisiqinisekiso sokuphepha nokunethezeka. Izicathulo azinazo nje kuphela izici eziguqulwe ukuze zisebenze emakhazeni nasemakamelweni abandayo, kepha futhi zibukeka zanamuhla.
IBERING BIS amabhuzu wesitolo abandayo
Ikhwalithi ephezulu yenduduzo nokuphepha
Izinyawo zingenye yezitho zomzimba ezijwayele ukuphola, yingakho kubalulekile ukuthi zivikelwe kahle kubo bonke abasebenza amahora amaningi nsuku zonke emakamelweni lapho amazinga okushisa ehla aze afike ku -45 degrees Celsius.
Ngaphezu kokunethezeka nokunethezeka, usayizi okhethwe kahle, izicathulo kufanele zinikeze ukuvikelwa okusebenzayo kwiqhwa. Ngalokhu engqondweni, senze isiqiniseko sokuthi okunhlobonhlobo kuvela kokunikezwayo.
Ukunikezwa kufaka izicathulo zesitolo ezibandayo ezingenamanzi ezenziwe ngesikhumba se-cowhide njenge Amabhuzu we-BCW, izicathulo ze-BCU ezifakiwe. Siphinde sibe nezicathulo zesitolo ezibandayo ezingangeni manzi IBHINJANA BIS yenziwe ngenhlanganisela ye-PU emelana namazinga okushisa aphansi aze afike ku - 30 degrees. Amamodeli abiza kakhulu yizicathulo zeRockfall.
Izicathulo I-Rockfall Alaska Coldstore zinikela ngokuvikelwa ekuweni phansi kwehle kube -40 degrees, zenziwe ngesikhumba sekhwalithi esezingeni eliphakeme, esiphefumula futhi esingangenwa ngamanzi. Ngokwengeziwe, bane-Thinsulate® B600 thermal sole, enikezela ukufudumeza okushisayo okuphezulu nenkululeko yokugqoka.
Imikhiqizo ye-Rockfall iyatholakala uku-oda zingakapheli izinsuku eziyi-7 zokusebenza, njengoba ithunyelwa ivela endaweni yethu yokugcina izinto eNgilandi.
I-ROCKFALL I-Alaska COLDSTORE ukuvikela izicathulo ezibandayo kuya ku -40 ° C
Ngaphezu kwezicathulo ezilusizo emsebenzini, siphinde sinikeze amasokisi angafakiwe, kuya ngemodeli eyenziwe ngoboya, inayiloni noma indwangu eboshiwe eshisayo. Ukutholakala okubanzi kosayizi kukuvumela ukuthi ukhethe umkhiqizo wabo bobabili abesifazane nabesilisa.
Ukunikezwa kwezimpahla zokugqoka ezibandayo kufaka nemikhiqizo yesethi ephelele yezingubo zomsebenzi. Kukhona namathebhu esitolo ibhulukwe, amajakethi, amagilavu i ama-overalls ezitolo ezibandayo kanye neziqandisi.
Izicathulo zeColdstoreamabhuzu esitolo abandayoamabhuzu esitolo abandayoizicathulo zokuphephaIzicathulo ezibandayoAmabhuzu e-Rockfallizicathulo ngamazinga okushisa aphansiizicathulo ezikhethekile